Iindlela ezingenasimumu zokuphononongwa ngokutsha: iindlela ezininzi eziziziyatha zokufa!
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Iindlela zokuba sisidenge zokufa kwakhona: iindlela ezininzi zokuba sisidenge zokufa!
Iindlela zokuba sisidenge zokufa kwakhona: iindlela ezininzi zokuba sisidenge zokufa!
Umthuthukisi: Uololiwe beMetro Khuphela: I-Android , ios
Uhlobo: Ngokuqhelekileyo Ixabiso: Simahla (ngentengiso)
Kwihlabathi lokonwaba, kunye nemidlalo ngokukodwa, uhlobo lokusinda belusoloko luluhlu olukhethekileyo. Imidlalo enjalo ihlala ikufutshane ukuba ingenakugqitywa, kwaye isizathu soko kukuba & iiapos zihlala zisebenza nzima. Kodwa ngokufika kwezemidlalo, ukujolisa kuye kwafuneka kutshintshelwe kumanqanaba obunzima oxolelayo, ithini ngolawulo olunqabileyo olunikezelwa siscreen. Kwaye ezo zinto zihamba apho izinto zihamba khona, kodwa zeziphi izinto ezilahlekileyo mva nje yidosi elungileyo yolonwabo olufanelekileyo elinokuthi liguqule i-head-basher kwi-streak ye-LoL & apos engahleliwe ngelixa ukhwele indlela engaphantsi.
Iindlela zokuba sisidenge zokuFa yenye yemidlalo esinike yona (kunye nezigidi ezingaphezulu) iiyure ezininzi zokuzonwabisa, kwaye inenkani ngokwala ukuguga, njengoko kunzima ukugqitha kwinqanaba elithile lamanqaku. Kodwa thina & apos; sihamba phambili kuthi. Ukuba ingqondo yakho izama ukuseka unxibelelwano lwenkungu phakathi kwesihloko somdlalo kunye nenye into, masikusindise kwintuthumbo-wena kunye ne-apos; mhlawumbi, ngaxa lithile okanye elinye, uhlangane ekwabizwa ngokufanayo kunye nokulutha ngokulinganayo (ethandwa kakhulu) ividiyo yomculo oopopayi oku kusebenze njengokhuthazo lomdlalo. Inyaniso mayixelelwe, besimamele ingoma ngeli xesha sibhala esi siqwenga. Njani & apos; s yokuba likhoboka?
Kumdlalo ngokwawo, jonga enye kule vidiyo ikhankanywe apha ngasentla kunye negama layo, kwaye uya kuthi uyazi ukuba ulindele ntoni. Ukubeka ngokulula, kwiindlela ezizizimumu zokufa, uzama konke okusemandleni akho ukuba uphile ixesha elide kangangoko kunokwenzeka, lonke eli xesha uthintela iindlela ezingekho ngqiqweni zokufa. Umdlalo usebenzisa isandi esifanayo somlutha kunye (non-gory) ikhathuni yobugcisa ukubonisa iimeko ezahlukeneyo ezizizimumu onokuzifumana ufile kuzo, kwaye amagama ayikwazi ukwenza oku kulungileyo. Nokuba yeyiphi na, xa uthe wabetha Dlala, umdlalo ungcelele lweziqendu ezimfutshane kakhulu, ezinamaxesha apho & ampos; Kuya kufuneka ulwele ubomi babalinganiswa abajongeka njengabahlobo, kodwa beyingozi. Kodwa jonga -kuba usinda ixesha elide, kokukhona kuya kusiba nzima, kwaye thina & apos; siyaxoka ukuba besithe thina & apos asikaze sizilahle ii-smartphones zethu kwimizamo eyoyikisayo yokugcina indawo zabucala zomntu othile, kunokuba buthuntu . Ewe kunjalo, loo mngcipheko mngcipheko, njengoko umdlalo ufuna ukuba uzitsibe ngokwenyani (ubuncinci kwimvakalelo ye-smartphone-ish yehlabathi), oko kuthetha ukuba umdlalo uya kujikeleza phakathi kokufuna ukuba uthambise ifowuni, kufuneka usule ngokukhawuleza isikrini ngomnwe wakho, kwaye uzame nokugubungela igazi lekhathuni elivuzayo kumanxeba amaninzi okanye uvuthuze kwifowuni yakho & apos; ukuvula imakrofoni ukugcina indiza yoopopayi emoyeni. Kwaye, kholwa okanye ungakholelwa, ukuba yenye yezona ndawo zihlekisayo zomdlalo - uya kuthi, ngokuqinisekileyo, utsal 'umdla, ujonge ukubonakala kwabantu abadlulayo, kwaye uzenzele abaphulaphuli babantu ongazange watshintshiselana nabo ilizwi ebomini bakho.
Kukho iapos eneneni inecala elinye elingathandekiyo kwiindlela ezizizimumu zokufa - iintengiso. Ezi ziqhelekileyo ziintengiso zevidiyo zezinye ii -apps, kwaye uhlala ufuna malunga nemizuzwana eli-10 ukuze uzilahle. Oku kunokucaphukisa ngokukhawuleza okukhulu, ke, ngombulelo, abaphuhlisi babonakala ngathi banomda kwinani leentengiso eziza kukuphazamisa phakathi kokuzama kwakhona. Ngamanye amagama, imizuzu emi-5 ungene, kwaye uya kukhululeka ngaphandle kwentengiso. Siyayixabisa into yokuba, ubuncinci okwangoku, akukho zingeniso zangaphakathi nohlelo, njengoko zihlala zisenza umda kukonwabela umdlalo weselfowuni, ungawuphuculi.
Lilonke, iindlela zokuba sisidenge ziphakathi kweentando zethu xa kuziwa ekubulaleni ixesha, kwaye sihlala sinoyolo ukukwenza. Kwaye ngelixa iindlela zokuba sisidenge ziya kuphumelela kwaye zingancedi imveliso yakho emsebenzini okanye esikolweni, ngokuqinisekileyo iya kuphucula imveliso yexesha lakho lokujikeleza, kwaye loo nto ubuncinci ibingama-95% obomi. Kunene?
Ubuhlobo obuqhelekileyo, kodwa bucelomngeni, nabo
Iindidi zeendlela ezizizimumu zokufa
Iindidi zokhuphiswano zisengozini yokulahla ifowuni yazo
Isidenge sasiyokufa kwakhona
fihla iifowuni kwi-drawer ye-app
Sebenzisa inqaku lomnyele njengepilisi ye-wacom
Ungazi njani ukuba ngaba ii-Apple 6s zakho zilungele ukutshintshwa kwebhetri yasimahla
Ukuhlawulwa kwangaphambili kwe-AT & T kunye neCricket Black ngolwesiHlanu kubandakanya i-Galaxy S9 kwisiqingatha, $ 99 i-iPhone 6s
Ukukhanya: indlela yokukhubaza i-Galaxy S6 yokutshaja i-LED, kodwa gcina ukukhanya kwesaziso
I-Apple inokukutyala imali emva kokulungisa isuti ye-iPhone
Ezona meko zilukhuni ze-iPhone 7 kunye ne-iPhone 7 Plus
Kutheni iSelenium kunye nekhukhamba akufuneki zisetyenziswe kunye
I-AT & T isungula iSaver Stream, ukunciphisa ividiyo ye-HD kwiNkcazo eseMgangathweni yokugcina idatha
Uyiskena njani ikhowudi ye-QR nge-Samsung Galaxy Qaphela 20 kunye neNqaku 20 ye-Ultra
I-Chromecast entsha ene-Google TV dongle ithatha iRoku ngokudityaniswa komdibaniso
Ngaba akukho luxhaswa ngumlawuli weFortite kunye nePUBG? Akukho ngxaki! Sebenzisa le lifehack ukongeza amaqhosha okuqala kwifowuni yakho!